Mampiaraka Filipina Vehivavy fitetezam-paritra mba Davao Cebu Filipina
Mihevitra ve ianao fa mahafantatra Filipina ny vehivavy. Koa handeha hiaraka amiko iray ity. Voalohany, eritrereto ny mahazatra Aziatika hijery ny fiainana: aina, ny fisainana lalina, ary ny hafalian’ny nofo. Manaraka, dia eritrereto hoe Espaniola haja, amerika fitiavana sy ny coquetry, ary tia ny olon-tiany. Farany, manala ny fitsaratsaram-poana, ary avy eo ianao efa nahazo ny toetra fototry ny Filipina vehivavy. Ny Filipina dia tsy manam-paharoa ao amin’ny Iraisam-pirenena fampidiran-dresaka orinasa. Ela be talohan’ny amin’ny Firaisana Sovietika lavo, dia maro ny Amerikana, ny olona efa nahita ny hatsarany sy ny hatsaran-tarehy ny Filipina ny vehivavy, ary efa nanao ny azy ny vadiny. Ny lehilahy dia matetika ao amin’ny Miaramila sy ny nitoby tao Filipina nandritra ny taompolo maro. Sambatra ireo sendika eo amin’ny Filipiana vehivavy Amerikana sy ny lehilahy no fiainana maharitra ny fitiavana ny fanoloran-tena fa nanao ny tena fiantraikany tsara eo amin’ny mpivady anjara sy ny fianakaviany. Inona marina izany ny taranaka lasa izay no truer na dia amin’izao fotoana izao. Misy an’arivony maro maha-te ho tia Filipina ny vehivavy izay mety haniry ny hanana toy izany koa sambatra ny fiainana ho toy ny vehivavy voalaza etsy ambony sy ireo miandry ny avy any ivelany ny olona hitsidika azy ireo ao amin’ny firenena. Filipiana vehivavy mamy, mahafinaritra, tena sariaka, ary nanolo-tena ny fianakaviana sy ny olona izay tiany izy ireo. Ny voalohany dia manararaotra izany Filipina mampiaraka tour manolotra ny hafa firenena Vahiny Raharaha fitsidihana dia izay rehetra Filipina ny vehivavy miteny anglisy. Noho izany, ny mpandika teny dia tsy ilaina (tahiry ho anao), ary tsy misy fifandraisana sakana. Filipiana ankizivavy no tena zatra American ny kolontsaina sy ny manana olana kely fanitsiana ny USA fomba fiaina. Filipiana vehivavy matetika kokoa ny hihaona ny tendrena ho suitor amin’ny alalan’ny mpanelanelana.
Ny antony Filipina vehivavy hiaraka orinasa ity dia noho ny mpitantana ao amin’ny Filipiana birao manorina ny matoky ny vehivavy, ary izy ireo dia manana aina ny mpitantana sy ny orinasa ho toy ny mpanelanelana.
Jereo ny sary sy mandany ny kely na ny famakiana ny mombamomba azy. Ho hitanao ao Filipina ny vehivavy dia tsotra, maneho hevitra, ny fitiavana, tsara fanahy, tia namana, manao ny marina, ny tsara fanahy sy ny zavatra hafa maro izahay, samy mahalala ianao mitady. Ny Filipina manolotra maro ny zavatra ho atao sy ny maro ny asa mahakasika ny rano. Noho izany, na dia ny tora-pasika bum, na jereo fotsiny ny rano ao amin’ny fialan-tsasatra, ny Filipina dia tena tsara tarehy tora-pasika miandry amin’ny maro ny mitoka-monina iray ho anao sy ny Filipina lady ny hangala izy. Amin’ny morontsiraka in-droa toy ny lehibe tahaka ny USA ianareo dia azo antoka fa hahita toerana ho ny eritreritsika. Davao manolotra lehibe toetr’andro taona rehetra manodidina izany dia afaka manomana ny fitetezam-paritra amin’ny ny tsy hanahirana. Ireto ambany ireto ny zavatra tokony hatao mandritra ny fitsidihany tao Filipina izy. Nihanika ny Tendrombohitra Apo fihaonana an-tampony izay no izy, ny tongony ary ny efatra andro hanihana. Fitsidihana ny Filipina Voromahery Maha-foibe sy mahita ny gidro mihinana ny voromahery. Fitsidihana ny Perla toeram-Pambolena Beach Resort, amin’ny Samael Nosy. Mandehana any amin’ny Voay park: ny anarana dia milaza izany rehetra izany. Ianao sy ny Filipina vehivavy dia mankafy ny tamer asa tao amin’ny valan-javaboary toy ny mpitaingin-tsoavaly, fa raha manana ny fanahin ny adventure ianao dia mety te-hanana ny handeha amin’ny sakafo tanora crocs zava-nitranga tsy ela adino. Raha vonona ianao mba manana sakafo hariva niaraka tamin’ny zazavavy Filipiana iray na inona na inona ny lanilany te hihinana, dia afaka hahita izany eto. Filipiana nahandro dia ny fitambaran’ny Sinoa, Espaniola sy Amerikana lovia avy horita, vary crisps, tamales, mba mahazatra American burgers. Lehibe loatra ny sakafo, zava lehibe, ary tena zava-dehibe lehibe Filipina ny vehivavy miandry anao misy na inona na inona mitazona anao indray
← Izay Mampiaraka Toerana Manana ny Tsara indrindra Filipinas
Ny fomba hitsena ny Filipina ao an-toerana ny Fiainana ao Filipina →